IFTIINKACUSUB.COM: Qisso cajiib ah : Beenta aad caruurtada bartaa dib ayay kuugu soo noqotaa adiga!
Qisso cajiib ah : Beenta aad caruurtada bartaa dib ayay kuugu soo noqotaa adiga!
Hadii aad ilmahaaga u noqoto macalinka Beenta bara, maxaa u diidaaya in uu isna noqdo arday sifiican u qaata casharka beenta ah ee aad adigu bartay,walibana uu noqdo arday sida ugu fiican uga soo baxa beentii iyo khaladaadkii aad macalinka ugu ahayd,una arko in beentii aad bartay ay tahay mid dadka oo dhan uu u sheegi karo.
Shugri ilayn dardaaran walid ayay qabtaaye,maskaxdeeda wixii ay ku haysay dibnaheedu soo tuure oo ah MAYA HOOYO MA JOOGTO,caruuri waa ceel laga waynaday,waxa qofkii talafoonka soo garaacay ama soo wacay uu hadana ku celiyay su'aal labad oo ah Habar-yar halkay ku maqan tahay?
Shugri Hoyadeed horay waxa ay ugu sheegtay oo kaliya in ay dadka ku tidhaahdo hooyo ma joogto,balse su'aashan labaad ee shugri la waydiiyay ee ah halkay ku maqan tahay shugri ma haysato wax ay kaga jawaabto,kadibna inta ay hoyadeed iyo Abaheed oo wada fadhiya soo jaleecday ayaa waxa ay hoyadeed ku tidhi iyada oo talafoonkana dhagta ku haysa,HOOYO MAXAAN KU IDHAAHDAA HALKEED KU MAQAN TAHAY.
Maalin kale oo maalmaha ka mida ayaa talfoonkii waxaa kusoo dhuftay qof kale oo markaasi kasoo hadlaaya wadankii,sanqadhii jalaska ayaa waxaa markiiba maqashay Shugri-yar,qofkii soo hadlayay ku bilaw HALOO kutee shugri yarna WA'AYO,waxaa ku xigay Abti waa aniga e Hooyo ma joogtaa,shugri markan ka baxsatay jawaabtii ay hore u bixisay oo lagu dagaalay,kutee maya waxa ay ku maqan tahay Suuqa,qofkii soo hadlayay waxa uu shugri waydiiyay yaa guriga jooga ? Shugri waxa ay si lama filaana u tidhi waxaa jooga Aabo oo halkan fadhiya,soo hadlihii kuyee iidhiib isagaban baryahan oo dhanba u bahnaaye.
Madaxa xuquuqul insaanka QM oo Itoobiya booqanaya